जेठ २५, २०७७ शिवनाथ यादव
अहिले विश्वभरी नोवेल कोरोना भाईरस ( कोभिड १९ ) को महामारी छ । मानिसहरु लकडाउन (बन्दाबन्दी) को अवस्थामा छन । हामी कहाँ पनि भाईरसको प्रकोप बढदो छ र अझ बढने अनुमान स्वयम सरकारले गरिरहेको छ । बाहिरबाट आएका तथा कोरोना भाईरसका संकास्पद व्यतिmलाई राख्नका लागि विद्यालय तथा कलेजहरुलाई क्वारेन्टाईन बनाईएको अवस्था छ । पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य संस्था नहुदाँ आईसोलोशनको अभाव हुने देखिएको छ । भएका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरु व्यवस्थित नभएका तथ्यहरु बाहिर आईरहेका छन । हुन त स्वास्थ्य संस्था अव्यवस्थित हुनु, औषधिको अभाव हुनु, उपचारमा लापवार्ही हुनु जस्ता समाचार नयाँ होइनन । पहिला पनि यस्ता समाचार आएकै हुन । तर यस तर्फ हाम्रा जनप्रतिनिधिको ध्यान किन जादैन । स्वास्थ्य सेवा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा किन पर्दैन । यस्तो महामारीको अवस्था छ । आम जनताले उपचार पाएनन । केहि निजि अस्पतालहरुले जनतालाई ठगे । विपतको समयमा स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमताले पुगेन भन्ने स्वयम जनप्रतिनितिहरु अहिले पनि स्वागतद्धवारको उद्धघाटन गरिरहेका छन । सवारी साधनमा पैसा खर्च गरिरहेका छन । यस्ता जनप्रतिनिधिलाई के भन्ने ? अहिलेको आवश्यकता भनेको हाम्रा जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने, रोजगारी गुमेकाहरुका लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादकमुलक सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने होईन र ? तर खोई त हाम्रा जनप्रतिनिधिको ध्यान आवश्यता तिर गएको ? आवश्यकतामा आधारित योजना खोई त ?
धेरै स्थानीय तह मात्रै नभई प्रदेश सरकारको समेत योजना हेर्दा फलानोको घर देखि त्यहाँ सम्म माटो भरी ग्रावल गर्ने, मठ, मन्दिर तथा मस्जिदको कम्पाउण्ड घेर्ने, नाला बनाउने, कलभट बनाउने योजना देखिन्छ । शुरुका दिनहरुमा जुन खालको योजना आयो त्यसैलाई कपी गर्ने परम्पराले गर्दा आवश्यकता भन्दा पनि पुराना योजनाहरु दोहोरिएको देखिन्छ । पहिलेको भन्दा अहिलेको आवश्यताहरु फरक भएका छन । परम्परागत रुपमा बनाईएका योजना भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा योजनाहरु बनाउन आजको आवश्यकता देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा त झन स्वास्थ्य सेवा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य संरचनाहरुको निर्माण तथा दिगो विकासका लागि योजनाहरु ल्याउन जरुरी छ । पहिलाका जवानामा आफनो नाम दिवालमा राख्नका लागि बनाईने स्वागत द्धवार भन्दा पनि जनताको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक अस्पताल निर्माण गर्नेको नाम शिलालेखमा अमर हुने देखिन्छ । असार समान्तमा कति बजेट खर्च भयो भन्दा पनि यस बर्षको बजेटबाट जनताले के पाए ? जनताका लागि यस वर्षको बजेटले के दियो यो सोचका साथ योजना ल्याउन जरुरी छ । वर्तमान समयलाई मध्य नजर गरी आम जनताको आवश्यकतामा आधारित योजना ल्याउनका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिको ध्यान जान जरुरी छ । पुराना योजनालाई परम्परागत रुपमा दोहोरयाउनु भन्दा पनि आवश्यकता के छ ? आम जनताको माग के छ त्यसलाई आधार बनाएर स्मार्ट योजना ल्याउन जरुरी छ ।
विगतका ५ वर्षलाई हेर्ने हो भने कुनै न कुनै रुपमा बर्षेनी हामी विपतको सामना गरिरहेका छौ । ५ वर्ष पहिले भुकम्पबाट क्षति भएका कतिपय संरचनाहरु अझै सम्म बन्न सकेका छैनन । कतिपयको घाउ अहिले सम्म निको भएको छैन । अझ प्रदेश २ मा त हामी कहिले बाढी पहिरो त कहिले शितलहर, हुदाँ हुदै अहिले हावाहरी पनि थपिएको छ । र अहिलेको महामारी त चलिरहेकै छ यसमा पनि प्रदेश २ जोखिमै छ । यसरी विपतहरु आई रहदा पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु विपत व्यवस्थापनका योजना ल्याएको देखिदैन । विपत व्यवस्थापनको नाममा हरेक वर्ष केही रकम मात्र छुटयाउने गरेको हेर्न सकिन्छ तर अव यसरी विपत व्यवस्थापनलाई हल्लाका रुपमा लिने र परम्परागत रुपमा केही लाख रकम छुटयाएर काम चलनेवाला छैन । विपत व्यवस्थापसंगै जोडेर त्यसबाट उत्पन्न हुने स्वास्थ्य समस्या, बेरोजगारी तथा विपन्नलाई सहयोग गर्ने खालको योजना ल्याउन जरुरी छ । होईन भने स्थानीयले प्रदेशलाई, प्रदेशले संघिय सरकारकारलाई र आम जनताले तीनै तहका सरकारलाई गुनासो गर्नु भन्दा अरु केही हुदैन ।
आइतवार, जेठ २५, २०७७, ०२:०६:००
असारे विकासको नाममा देशको ढुकुटीमाथि चरम बेइमानी ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किने’ डरले सिङ्गो कर्मचारी वृत्त मौन बस्छ ।
असार १४, २०७७ शिवनाथ यादव
जेठ २, २०७७ शिवनाथ यादव